Pyrolysis: waa maxay, sifooyinka, waxa loogu talagalay iyo faa'iidooyinka | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
Geedi socodka pyrolysis ama pyrolytic, sidoo kale loo yaqaan, waa hab kaas oo xaalufinta biomass ay soo saarto ficilka kulaylka iyada oo aan loo baahnayn ogsijiin, taas oo ah, waxay ku dhacdaa jawi gebi qalalan. Alaabooyinka lagu sameeyay natiijada pyrolysis waxay noqon karaan adkaha, dareeraha iyo gaasaska, waxayna u dhigmaan alaabta sida dhuxusha ama dhuxusha, daamurka iyo ugu dambeyntii alaabta gaaska ee caanka ah ama uumiga dhuxusha. Habkani wuxuu ku dhici karaa kaligiis dabeecadda ama wadajirka inta lagu jiro gubashada ama gaaska.
Maqaalkan waxaan kuu sheegi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato pyrolysis, sifooyinka iyo muhiimada.
2 Noocyada pyrolysis
3 Waa maxay pyrolysis loo isticmaalo jikada?
4 Faa'iidooyinka foornooyinka iyo muhiimadda deegaanka
Pyrolysis waa daaweyn heerkul kiimiko ah taas oo Waxaa lagu dabaqi karaa badeecad kasta oo kaarboon ku salaysan. Maaddadu waxay soo gaadhay heerkul sarreeya, maqnaanshaha ogsijiinta, si kiimiko ahaan iyo jir ahaanba u kala soocaan unugyo kala duwan.
Pyrolysis waa nooc ka mid ah heerkulbeegyada waxaana lagu qeexi karaa sida kulaylka kala-goynta ee shayku ku dhaco maqnaanshaha ogsijiinta ama nooc ka mid ah reagent. Burburka dhacay wuxuu ka dhalan karaa taxane isku dhafan oo falcelin kiimiko ah iyo kulaylka iyo hababka wareejinta tirada badan. Waxa kale oo lagu qeexi karaa inay tahay tillaabooyinka dhaca ka hor gaaska iyo gubashada.
Marka ay ku dhacdo qaabkeeda daran, Kaarboonka kaliya ayaa u hadhsan sida hadhaaga, kaas oo loo yaqaan charring. Iyada oo loo marayo pyrolysis waxaan ku heli karnaa alaabooyin sare oo kala duwan oo waxtar u leh goobta farsamada. Alaabta Pyrolysis waxay had iyo jeer soo saartaa gaas adag sida kaarboon, dareere iyo gaas aan la adkeyn karin sida H2, CH4, CnHm, CO, CO2 iyo N. Maadaama marxaladda dareeraha ah kaliya laga soo saaro gaaska pyrolysis inta lagu jiro qaboojinta, labada durdur ee gaaska waa la wada isticmaali karaa codsiyada qaarkood halkaasoo syngas kulul si toos ah loogu keeno qolka gubanaya ama oksaydhka.
Waxaa jira laba nooc oo kala duwan oo pyrolysis ah iyadoo ku xiran xaaladaha jireed ee lagu fuliyo:
Aqueous pyrolysis: Ereygan waxaa loo isticmaalaa marka ay lagama maarmaan tahay in la tixraaco pyrolysis ee ku dhaca joogitaanka biyaha, sida dildilaaca uumiga ee saliidda ama kuleylka kuleylka ee hadhaaga dabiiciga ah ee saliidaha culus.
Vacuum Pyrolysis: Noocan ah pyrolysis vacuum waxay ku lug leedahay kuleylinta walxaha dabiiciga ah meel faaruq ah si loo gaaro dhibco karkaraya oo hooseeya loogana fogaado falcelinta kiimikaad ee aan fiicnayn.
Habka ay ku dhacdo pyrolysis waxa loo qaybiyaa saddex marxaladood, sida soo socota:
Marxaladda koowaad waxaa jira si tartiib ah u burbursan oo soo saara xaddi yar oo biyo ah, oxides ee kaarboon, hydrogen iyo methane. Burburkaani wuxuu ku yimaadaa natiijada jebinta bonds sababtoo ah heerkulka sare ee habka iyo sii deynta gaasaska ku xayiran dhuxusha.
Marxaladda labaad waxaa la yiraahdaa heerka burburka kulaylka firfircoon. Heerkulka ayaa kor u kaca inta lagu jiro marxaladan, unugyada kaarboonku si qoto dheer ayey u burburaan, iyaga oo samaynaya karboorno iyo daamur la qaadi karo. Marxaladani waxa ay bilaabataa 360ºC waxa ayna dhamaanaysaa marka ay gaadho heer kul ku dhawaad ​​560ºC.
Marxaladda ugu dambeysa waxay ku dhacdaa heerkul ka sarreeya 600ºC waxaana lagu gartaa luminta tartiib tartiib ah ee hydrogen iyo heteroatoms kale.
Waa maxay pyrolysis loo isticmaalo jikada?
Marka aan ku jirno jikada, waxaan u baahanahay inaan haysano agabka lagama maarmaanka ah si nolosheennu u fududaato, in la haysto foorno casri ah ayaa ku habboon taas. Hadda waxaa jira foornooyin kala duwan oo leh hawl is-nadiifin, oo loo yaqaan 'pyrolysis ovens', kuwaas oo shaqadooda ugu weyni ay tahay inay awoodaan inay is nadiifiyaan.
Foornooyinka noocaan ah Waxay awood u leeyihiin inay kor u qaadaan heerkulka ilaa 500 ° C; Burburinta hadhaagii cuntada ee gudaha ku jira, u rogi lahayd uumi ama dambas, iyo sidoo kale baabi'inta urta aan fiicnayn ka dib marka lagu kariyo gudaha foornada. Taasi waa, cuntada hadhaa, sababtoo ah heerkulka sare, u beddelo walxaha organic galay carbon dioxide, taas oo, marka loo beddelo biyaha, uumi; sidoo kale, maaddada aan noolaha ahayn waxay isu beddeshaa dambas marka ay la kulanto heerkulkaas.
Habkani wuxuu qaadan karaa 1 ilaa 4 saacadood., iyadoo ku xiran sida uu nadiif u yahay barnaamijku, dhamaadka waxaan si fudud u nadiifin karnaa foornada maro qoyan oo ururin dambaska. Sidan oo kale, isticmaalka alaabada kiimikaad ee waxyeelada u keeni kara caafimaadka ayaa meesha ka saaraysa.
Faa'iidooyinka foornooyinka iyo muhiimadda deegaanka
Haysashada foorno noo ogolaanaysa inaan badbaadino waqti iyo lacag, samaynta pyrolysis waxay keenaysaa faa'iidooyinka soo socda:
Shaki la'aan, faa'iidada ugu weyni waa shaqada is-nadiifinta.
Waa ecological maadaama ay yarayso isticmaalka alaabta kiimikada si loo nadiifiyo foornada.
Marka loo eego xisaabiyaha qiimaha korontada ee Komishanka Tamarta Qaranka, qiimaha korontadu waa yar yahay sababtoo ah waxay isticmaashaa 0,39 senti kaliya.
Waxaa lagu sameeyay qalabka ugu tayada sarreeya si loo ilaaliyo alaabta guriga oo ka soo jeeda heerkulka sare.
Marka foornada ay gaarto heerkul ah 500 °C, albaabka foornada ayaa quful, foornadana way is nadiifisaa si ay uga hortagto shilalka.
Way ka raaxo iyo waxtar badan yihiin foornooyinka dhaqanka.
Waxaa la qorsheyn karaa in la bilaabo pyrolysis waqtiyada uu kharashka korontadu yar yahay.
Pyrolysis waa muhiim sababtoo ah waxay ka caawisaa xakamaynta wasakhowga hawada ee la xidhiidha gubashada.. Waxa kale oo ay gacan ka geysataa dhimista xadiga qashinka soo galaya iyo soo saarista wasakhda wasakhaysan, kaas oo kordhiya cimriga qashinka oo wanaajiya tayada qashinka. Ugu dambeyntii, sidoo kale waa hab loogu beddelo qayb qashinka ka mid ah shidaal la kaydin karo oo la qaadi karo.
Marka la eego pyrolysis ee lignin, sidoo kale qayb ka mid ah alwaax, waxay soo saartaa xeryahooda udgoon iyo kaarboon sare leh, qiyaastii 55% kiiska cellulose iyo 20% kiiska saliidda alwaax. 15% haraaga daamurka iyo 10% gaas.
Haddii ay dhacdo in bioomass-ka kaynta uu yahay pyrolyzed, alaabteedu waxay saameyn aad u weyn ku leedahay alaabta ka soo baxda. Tusaale ahaan, doorka qoyaanku waa in la yareeyo wax-soo-saarka habka soo-saarka sababtoo ah kulaylka ayaa loo baahan yahay si loo uumi-baxo biyaha iyo sidoo kale soo saarista kaarboon jajaban marka loo eego marka baomassku leeyahay qoyaan hoose. Sidaa darteed, waxaa lagu talinayaa in heerka qoyaanka ee biomassku uu ahaado ku dhawaad ​​​​10%. Cufnaanta xoolaha bilowga ah waxay sidoo kale saameyneysaa tayada kaarboonka ee lagu sameyn doono pyrolysis, iyo haraaga kaynta waxaa lagula talinayaa kaarboon tayo sare leh.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto pyrolysis iyo sifooyinkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Pyrolysis